आर्थिक – Jaljala Online
करको दर नबढ्ने, रोजगारी सृजना गर्ने गरी आउँदैछ यस्तो बजेट
कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्ने गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमानित विवरण पेश गर्नेछ । यो बजेटले करको दर नबढाउने भएको छ । कोरोनाका कारण थलिएको व्यापार व्यवसायलाई कर छुट दिइनेछ । यद्यपि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको भने करको दर बढ्नेछ । स्रोतको दबाबका बीचमा ल्याइएको बजेटको […]
मंसिर २९, काठमाण्डौ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ६० पैसा तोकेको छ । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा […]
मङ्सिर २८, काठमाडौँ । उपत्यकावासीको प्याजको माग केही दिनदेखि चिनियाँ प्याजले धान्न थालेको छ । भारतबाट प्याज आउन रोकिएपछि चिनियाँ प्याज भित्रिएर उपत्यकावासीको माग धानेको हो । गएको असोजमै भारतले विदेशमा प्याज निर्यातमा रोक लगाउने नीति लिएसँगै भारतीय प्याज व्यापारीहरूले गैरकानुनी बाटोबाट भिœयाउँदै आएका थिए । गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्याज निर्यात गरेको भन्दै भारतीय सरकारले व्यापारीलाई नै कारबाही […]
मंसिर २७, दाङ । तुलसीपुर उपमहमानगरपालिका वडा नं. ३ सातवास क्षेत्रमा सडक चौडा पार्ने क्रममा झन्डै दुई दर्जन जति खानेपानीका पाइपहरु क्षति विक्षत भएका छन् । ती पाईप तुलसीपुर खाने पानी तथा सरसफाई संस्थाका हुन । त्यहाँ सडक विस्तार गर्न गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ४४ बर्षीय कर्णबहादुर बुढाले पैंया खोरेदेखि सातबास सम्म सडक चौडा पार्ने […]
प्रचण्डका घरबेटीको फोटो टाँसेर विरोध गरेपछि देखियो यस्तो चमत्कार
कात्तिक २९, काठमाडौं । स्थानीयवासीले आफ्ना सञ्चालकको फोटो गाडी र बिजुलीका पोलपोलमा टाँसेर विरोध गरेपछि शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कमलविनायक-नगरकोट सडक खण्डमा धमाधम काम गर्न थालेको छ। यो खबर युनिक श्रेष्ठले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । भक्तपुरको कमलविनायक र नगरकोट जोड्ने सडकमा अहिले दैनिक १८ घन्टा काम भइरहेको छ। ‘डे र नाइट सिफ्टमा काम भइरहेको छ, केही अवरोध […]
Posted on November 15, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
काठमाडौं : प्याजको मूल्य पाँच वर्षकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। प्याज अभाव देखाएर व्यापारीले उपभोक्तालाई प्रतिकिलो एक सय ५० देखि एक सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको कालीमाटी बजारमै थोकमा प्याजको मूल्य एक सय २८ र खुद्रामा एक सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्याजको मूल्य उत्कर्ष बिन्दुमा पुगेको यो […]
Posted on November 10, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
Posted on November 10, 2019 November 10, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
फिनल्यान्डसँग सिधा हवाई सेवाको तयारी
काठमाडौं : उत्तरी युरोपली राष्ट्रसँग नेपालले सिधा हवाई सेवा सझौता गर्ने भएको छ। हवाई सेवा सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी थालिएको छ। नेपाल फिनल्यान्ड सिधा हवाई सेवा सम्झौता (एएसए)का लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्नो प्रस्तावको मस्यौदा पठाउने काम भइसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका हवाई उद्योग महाशाखाका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने।उनका अनुसार आगामी नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा […]
काठमाडौंमा घर किन्ने योजना बनाउदै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यो पढ्नुहोस
कात्तिक १७, काठमाडौं । तपाईं घर किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ? तर पुग्दो पैसा छैन? यदि आफ्नै घरमा बस्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब बैंकले तपाईंलाई सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७६ जारी गर्दै आवास वा घर कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जसमा ३० प्रतिशत रकम बुझाएर ७० प्रतिशतसम्मको घर कर्जा लिन […]
Posted on November 3, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
नेपाल टेलिकमको फोरजीमा के छ नयाँ सुविधा? थाहा पाउनुहोस्
नेपाल टेलिकमले देशका ५९ सहरमा फोरजी सेवा सुरु गरेको छ। आउने फागुनसम्म देशभर सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको टेलिकमले यो सेवा एड्भान्स्ड भएको बताएको छ। टेलिकमो फोरजीमा के छ नयाँ सुविधा जुन यसअघि थिएन? नेपाल टेलिकमले नेपालमै पहिलोपटक भ्वाइस ओभर एलिटिई सुविधा ल्याएको छ। विस्तारित फोरजीमा यो सुविधा पनि भएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले […]
Posted on October 3, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)